Ngwurugwu ndi ozo: Nri ndi na enye ezigbo nje | Nutri Nri
Ikwesiri imeziwanye nri gi? Inweta probiotics ndị ọzọ nwere ike inyere gị aka ime nke a n'ihi na a na-atụle ya weghachite nguzo nje na eriri afọ.
Chọpụta uru ndị ọzọ enyere na microorganism ndị a na-ekwukarị ebe niile ihe oriri nke ị nwere ike itinye ha na nri gị.
1 Gịnị bụ ọgwụ nje?
2 Ha bụ otu ihe ahụ dị ka prebiotics
2.1 Ha na-arụ ọrụ?
3 Otu esi enweta probiotics eke
4 Banyere probiotic Mmeju
Gịnị bụ ọgwụ nje?
Iji kọwaa ihe probiotics bụ, ọnụnọ nke nje bacteria dị mma ma dị njọ na okike bụ mmalite dị mma. Probiotics bụ ndị otu nke mbụ. Ọ bụ maka microorganisms bara uru nke na-ebi n'ime ahụ na ha ga-arụ ọrụ dị mkpa na ahụike zuru oke.
Probiotics beae a eye ma nneɛma a ɛtete saa. N'ụzọ nke a, nyere aka dobe ogo nke nje na eriri afọ. Na mgbakwunye, e jikọtara nje ndị a na yist na ọtụtụ uru ahụike ọzọ. Peoplefọdụ ndị na-akpọrọ ha:
Na-agwọ afọ ọsịsa, afọ ntachi, na gas. A na-ejikarị ha na ọgwụ nje eme ihe iji lụso mmetụta ndị dị na arụmọrụ nke eriri afọ.
Na-emeso mgbaàmà nke ọnya afọ ma ọ bụ ọrịa obi mgbarụ
Mee ka usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ sie ike
Mee ka anabataghị lactose belata
Melite ọrụ ụbụrụ
Chebe megide nje nje
Cholesterol dị ala
Mee ka mgbaàmà nke eczema ma ọ bụ psoriasis belata
Mee ka mgbaàmà nke ike ọgwụgwụ na-adịghị ala ala belata
Na-akwalite ahụike zuru oke
Ha bụ otu ihe ahụ dị ka prebiotics
Mba, ọ dịkwa mkpa ịghara ịmegharị ha na prebiotics. N'adịghị ka probiotics, prebiotics adịghị ebute nje bacteria. Kama nke ahụ, ihe oriri prebiotic na-eme bụ inye usoro nke ihe ndị dị mma na nje bacteria dị adị n'ime afọ gị ka ha wee too. Asparagus, otis, na mkpo bụ nri prebiotic.
Ha na-arụ ọrụ?
Enwere ọtụtụ ndị na-azọrọ na ha enweela mmụba na ahụ ike ha (ọkachasị na eriri afọ) mgbe ha nụsịrị ọgwụ probiotics. Ma enwekwara ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị nyocha bụ ndị, n'agbanyeghị na ha ghọtara ụfọdụ uru, kwenyere na ya a ka choro ihe omumu banyere ihe ndi bara uru. N'aka nke ozo, odi nkpa iburu n'uche na otutu otutu probiotics di. Mmetụta ya na ahụ dị iche iche dabere na ụdị probiotic na ajụjụ.
Otu esi enweta probiotics eke
Nwere ike nweta probiotics site fermented nri. Yogurts bụ ihe kachasị ewu ewu nke probiotics. A dụrụ ha ọdụ ka ha mee ka ọkpụkpụ ahụ sie ike. Na ụdị abụba dị ala na obere shuga na-esonyekarị na atụmatụ nha dị arọ, ọkachasị maka nri ehihie ma ọ bụ nri.
Mana ọ bụ ezie na ikekwe enwere ike ịnweta ya, yogọt abụghị naanị nri probiotic. E nwere ezi ndị ọzọ isi mmalite nke probiotics maka nri gị nke bara uru ịtụle:
Kefir: Echere na otu n'ime ihe ndị kachasị mma nke probiotics, kefir bụ mmiri ara ehi amentedụ mmiri a mụrụ na Caucasus. A na-akwado ya site na itinye keodu nodules na mmiri ara ehi ma ọ bụ nke ewu. Ndị mmadụ na-anabatakarị lactose inlerance, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ime n'enweghị mmiri ara ehi, ndị ọzọ dịka kefir mmiri bara uru ịkọwa. Nwere ike ime ya n'onwe gị n'ụlọ ma ọ bụ zụta kefir dị njikere na nnukwu ụlọ ahịa.
Sauerkraut: Ọ bụ fermented kabeeji. Kimchi Korea bụ nri probiotic ọzọ emere site na nri a (n’etiti akwụkwọ nri ndị ọzọ).
Miso: Ọ bụ pasta ndị Japan eji ọka dị iche iche eme. Ejikọtara ya na uru ahụike dị mkpa, a na-eji ya ọkachasị na miso ofe.
Chiiz ụfọdụ: Mozzarella, cheddar, cottage, gouda ... N'agbanyeghị uru ya, chiiz kwesịrị iri ya mgbe niile.
Pịkụl gbara ụka: Iji mepụta probiotic mmetụta ọ dị mkpa na ha mere na-enweghị mmanya.
Tempeh: Ọ bụ ụdị Indonesia dị ka soybean. N’ebe ndị ọzọ ụwa, ọ ghọọla nri akpọrọ nke ukwuu maka ọgaranya na protein, ọkachasị ndị na-agbaso nri onye anaghị eri anụ.
Jufọdụ ihe ọicesụ juụ
Probiotics nwere ike inwe mmetụta ụfọdụ, ọ na-adịkarị obere. N'ọnọdụ ụfọdụ ha nwere ike ịmepụta gas dị nro na bloating. Ọ bụrụ na ha emetụta gị otu a, gbalịa belata ego.
Banyere probiotic Mmeju
Enwere ọtụtụ ụzọ iji nweta probiotics site na nri, mana ọ dịkwa ike inye probiotics ahụ site na mgbakwunye nri. Na capsule, ntụ ntụ, ma ọ bụ mmiri mmiri, ihe mgbakwunye na-eme ka probiotics dịkwuo mfe. Agbanyeghị, ha anọghị n'otu ọkwa nri dịka nri probiotic.
N'ikpeazụ, dị ka ọtụtụ mgbakwunye, ịnara ha nwere ike ọ gaghị adịrị gị mma. Tupu ịmalite ị proụ ọgwụ mgbochi ma ọ bụ mgbakwunye nke ụdị ọ bụla, ọ dị mma ịkpọtụrụ dọkịta, tumadi n’ihe banyere ndi di ime ma obu ndi na enye nwa ara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nutri Nri » Nri » Ihe okike probiotics
Aluminom na ahụike
Iwetulata ibu dara n’ibu